Xildhibaanadii diidanaa mooshinka oo tanaasul sameeyay & Axada.. - iftineducation.com
iftineducation.com – Kullamo u dhaxeeyay Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh iyo xildhibaanadii kasoo horjeeday mooshinka laga soo gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha ee buuqa ka dhex dhaliyay fadhiyadii baarlamaanka ayaa la isku afgartay in si sharciga waafaqsan loo horkeeno mooshinka maalinta beri oo ku beegan Axad, kadibna xildhibaanada si nabad ah loogu qeybiyo si kulamada danbe ay ugu doodaan, kadibna la geliyo cod u qaadis.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in Xildhibaanadii horay ugu soo horjeeday Madaxweynaha uu ku qanciyay in Ra’iisul Wasaaraha wada shaqeyn karin isla markaana ay muhiim tahay in wadada sharciga ah loo maro xalinta khilaafkaan, taasoo ay ku qanceen isla markaana ay ballan qaadeen xildhibaanadii horay u diidanaa mooshinka.
139 Xildhibaan oo horay mooshinka ugu soo gudbiyay xukuumadda ayaa dhankooda soo dhoweeyay tanaasulka ay sameeyeen xildhibaanadii kasoo horjeeday, halka warar kale ay sheegayaan in xildhibaanada diidanaa mooshinka ay qaarkood kusoo biireen kuwa soo gudbiyay mooshinka, balse tiradooda aan la shaacin.
Maalmihii u danbeeyay ayaa xarunta Villa Somalia iyo Villa Baydhabo oo ah hoyga Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa ka dhacayay shirar ay lahaayeen xildhibaanada isla markaana looga hadlayay sidii buuqa iyo fowdada looga hortegi lahaa si howlaha dowladda u cuuryaamin.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa culeys fara badan oo ka imaanayay beesha caalamka iyo Madaxdweynaha oo lagu doonayay in xal laga gaaro arintan ay ugu danbeyntii noqotay in la qanciyo xildhibaanadii buuqa sameynayay.
Marka maalinta beri baarlamaanka la horkeeno mooshinka oo loo qeybiyo xildhibaanada, waxaa shan maalmood gudahood loo qaadi doonaa codka kalsoonida xukuumadda Ra’iisul Wasaare Cabdiweli, iyadoo aan dhicin wax buuq ah.